Google ကအွန်လိုင်းမြေပုံနောက်ကျောအချိန်အတွက်သွား - သတင်း Rule
Google ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့အပေါ်ဖို့ကို virtual အချိန်ခရီးသွားခြင်းကဆက်ပြောသည် အင်တာနက်ကို ဟာယပူဇော်သက္ကာ.
အဆိုပါနည်းပညာကို titan လူအရပ်တို့ကို၎င်း၏အခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဓာတ်ပုံများကိုစုဆောင်းခဲ့နှစ်ခုနစ်ကျော်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာပြသနိုင်ဖို့ Street View ပုံရိပ်တွေပေါ်မှာနာရီပြန်လှည့်ခွင့်စတင်.
“သငျသညျအစဉျအမွဲကဲ့သို့သောအချိန်ခရီးသွားဖြစ်ခြင်း၏အိပ်မက်မက်ပါတယ် အကယ်. doc ဘရောင်း, ယခုသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်,” Street View ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ Vinay Shet ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်, မှတစ်ဦးဇာတ်ကောင်ကိုရည်ညွှန်းပြီး 1985 Back ကိုအနာဂတ်မှရုပ်ပြစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင် '' ။’
နောက်ကျောမှတွဲ Street View မော်ကွန်းတိုက်မှသမိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ 2007 Shet တစ်ဦးအဖြစ်ပုံဖော်ယျ Desktop ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် Google Maps ကိုမှာစူးစမ်းနိုင်ပါတယ် “ကမ္ဘာ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အချိန်ဆေးတောင့်။”
ပြသဥပမာပါဝင် 2014 ကမ္ဘာ့ဖလားအားကစားကွင်းဘရာဇီးမှာအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုယူဆောင်နှင့်တစ်ကြီးကျယ်သောငလျင်နှင့်ဆူနာမီအပြီးဂျပန်အတွက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး 2011.
“သငျသညျယနေ့ဆိဆိုရင်, 50 ယခုသင်သည်သင်၏ဟောင်းရပ်ကွက်အတွင်း၏အမှတ်တရများအားဖြင့်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မှအနှစ်,” အခြေခံအဆောက်အဦများ Google ကအကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Urs Holzle ၏ကပြောပါတယ် “feature အသစ်အအေး” Google+ မှာလူမှုကွန်ယက်မှာပို့စ်တွင်.
Facebook ရဲ့ Zuckerberg ဟာကမ္ဘာ့ဖလားခုနှစ်တွင်ဖူးဖို့လို ...
ကို Microsoft မှဖုန်းကိုယူနစ်ရောင်းဖို့ Nokia က 5.44 ဘီလီယံ ...
ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများက Twitter နှင့် New York Times ကိုဝင်တိုက်
16341	0 2014 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား, ဘရာဇီး, Google က, google Maps, Google က Street View, အင်တာနက်ကိုမော်ကွန်း, လမ်းမြင်ကွင်း, Urs Holzle
← နှစ်ချက် Canon စိတ်ဝင်စားသည် ဖိလစ်ပိုင်လေကြောင်းလိုင်းအော်ဟစ်ကြားတွင်ပျံသန်းငါးမန်းအယပ်မလျော့ဘူးလို့ပြောထားတယ် →